Lix ilaaliyeyaal ah ayaa lagu dilay weerarkii ka dhacay jardiinada ku taal DR Congo - teles relay
Lix ka mid ah ilaaliyeyaasha seerayaasha ayaa la dilay ka dib markii weerar lagu qaaday beerta caanka ah ee Virunga, oo ku taal bariga Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo.
Saraakiisha ayaa ku eedeeyay weerarka dabley loo yaqaan Mayi-Mayi, oo ka mid ah dhowr ka howlgala aagga.
Rangers-ka ayaa weerar gaadmo ah lagu soo qaaday iyagoo lugeynaya gudaha beerta, afhayeen ayaa u sheegay BBC.
Shaqaalaha ka shaqeeya baarkinka, oo hoy u ah gorillayaasha buuraha ee halista ku jira, ayaa inta badan la weeraraa.
Bishii Abriil ee sanadkii hore, 13 ilaaliyeyaal ah ayaa lagu dilay weerar gaadmo ah oo ay qaadeen jabhadda.
Dhowr kooxood oo hubeysan ayaa ka hawlgala gobolka bariga dhibka badan ka taagan yahay ee DR Congo, halkaas oo ay ku taal Virunga National Park - oo ah xarun ay leedahay hay'adda Unesco ee Dunida.
Bayaan ay soo saartay jardiinada ayaa lagu sheegay in baaritaanada hordhaca ah ay soo jeediyeen in ilaalada "si kadis ah loo qaaday oo aysan helin fursad ay isku difaacaan" intii uu socday weerarka subaxnimadii Axada.
Wuxuu sheegay ilaaliye kale oo dhaawac culus ka soo gaaray weerarka inuu helayo daaweyn isla markaana uu rajeynayo inuu soo kabasho buuxda sameeyo.
Wakiilka dowlada hoose, Alphonse Kambale, ayaa wakaalada wararka ee AFP u sheegay in sidoo kale ladilay labo maleeshiyo oo Mai-Mai ah
Ku dhowaad 700 oo waardiyeyaal hubeysan ah ayaa ka shaqeeya Virunga - oo ah keydka ugu da'da weyn Afrika - halkaas oo ugu yaraan 200 lagu dilay weerarro soo socday in ka badan toban sano, AFP ayaa werisay.
Maqaalkani wuxuu u muuqday markii ugu horreysay: https://www.bbc.com/news/world-africa-55611203
weerarkaDR CongoLix ilaaliyeyaal ah
Laba daaweyn 'nafo-badbaadin ah' COVID-19 oo daaweyn ah oo ay daahfureen dhakhaatiirta UK - BGR
Marvel's trippy 'WandaVision' ayaa timid Disney + - dadka